အိန်ဒိယ၊ ကုလားတနျ​ ပ​ရောဂကျြ​၊ NON-STATE ACTOR ​အေ​အေ – Kyaw Zaw Oo's Blog
November 6, 2019 January 13, 2020 web_master
အိန်ဒိယ၊ ကုလားတနျ​ ပ​ရောဂကျြ​၊ NON-STATE ACTOR ​အေ​အေ
​အိန္ဒိယ၊ ကုလားတန်​ ပ​ရောဂျက်​၊ non-State actor ​အေ​အေ
ပြီးသည့်​ နိုဝင်​ဘာလ (၅) ရက်​​နေ့က အိန္ဒိယ ပြည်​ထဲ​ရေး ဝန်​ကြီးဌာန ဝက်​ဆိုက်​မှာ တင်​ထားတဲ့ ထုတ်​ပြန်​ချက်​က်ို ဖတ်​ကြည့်​ပြီး စဉ်းစားစရာ အချက်​အနည်းငယ်​ ​ခေါင်းထဲကို​ရောက်​လာတာ ရှိတယ်​။
တစ်​။ ထုတ်​ပြန်​ချက်​မှာ အိန္ဒိယနိုင်​ငံသားတစ်​ဦး ​သေဆုံးသွားရတဲ့အတွက်​ ​ဒေါသ သို့မဟုတ်​ အလိုမကျခြင်း အရိပ်​အ​ရောင်​ လုံးဝမပါဘူး။
နှစ်​။ အိန္ဒိယအစိုးရက “Timely intervention လုပ်​မှု​ကြောင့်​” “အချိန်​နဲ့တ​ပြေးညီ ဝင်​​ရောက်​စွက်​ဖက်​လုပ်​ကိုင်​မှု​ကြောင့်​” လို့ ဆိုထားတယ်​။ ဒီစာသားရဲ့ ​နောက်​ကွယ်​က မ​ဖော်​ပြတဲ့ အဓိပ္ပါယ်​​တွေ ဖြစ်​စဉ်​​တွေကို​တွေး​တော စဉ်းစားမိတယ်​။ သံတမန်​ဆန်​ဆန်​ စကားလုံး​ရွေးချယ်​ သုံးစွဲထား​ကြောင်း သတိထားမိတယ်​။
သုံး။ ဖြစ်​စဉ်​​တွေ၊ ထုတ်​ပြန်​ချက်​​တွေကို ကြည့်​လို့ သ​ဘော​ပေါက်​သ​လောက်​ဆိုရင်​ – အိန္ဒိယ ဟာ ​အေ​အေကို တရုတ်​တပည့်​လို့ သ​ဘောထားတယ်​ ဆိုတာထက်​ အဆင့်​အတန်း ပိုလွန်​ရရှိထားတယ်​။ ကြိုက်​သည်​ဖြစ်​​စေ မကြိုက်​သည်​ ဖြစ်​​စေ ဆက်​ဆံရမယ့်​ non-State actor အစိုးရမဟုတ်​​သော အင်​အားစု အဖြစ်​ သ​ဘောထားပုံရတယ်​။
​လေး။ ရန်​ကုန်​ အိန္ဒိယသံရုံးရပ်​ကွက်​ရဲ့ အမည်​မ​ဖော်​လိုတဲ့ ရင်းမြစ်​ဆီက သိရသ​လောက်​ ကုလားတန်​စီမံကိန်းမှာပါဝင်​​ဆောင်​ရွက်​​နေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်​ငံသား​တွေကို ပလက်​ဝ အစရှိတဲ့ စီမံကိန်းနယ်​​မြေ​တွေကို သွားခွင့်​မပြုဆိုပြီး​တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်​လ (၁၂) ရက်​​နေ့ကတည်းက (ရခိုင်​ လုံ/နယ်​ဝန်​ကြီးအဖြစ်​ ဗိုလ်​မှူးကြီးဖုန်းတင့်​ တာဝန်​ယူထားစဉ်​ကတည်းက) တားမြစ်​ထားတာဖြစ်​တယ်​ လို့ ဆိုတယ်​။
ငါး။ ဒီလိုတားမြစ်​ထားတဲ့​နောက်​ပိုင်းမှာလည်းပဲ အိန္ဒိယနိုင်​ငံသား​တွေဟာ ပလက်​ဝဘက်​ကို လ​ပေါင်းများစွာ အ​ခေါက်​​ပေါင်းများစွာ သွားခဲ့ကြတယ်​ လို့ သိရတယ်​။
​ခြောက်​။ ဒီကြားထဲမှာ ကုလားတန်​စီမံကိန်းကို ​အေ​အေ က တားမြစ်​ကန့်​ကွက်​တယ်​ လို့​တော့ မကြားမိ​သေးဘူး။ နိုင်​ငံခြားသား ခရီးသွားလာခွင့်​တားမြစ်​ထားတာက​တော့ ရခိုင်​ပြည်​နယ်​ အစိုးရဖြစ်​တယ်​။
၂၀၁၉ နိုဝင်​ဘာလ (၆) ရက်​
[ – အိန္ဒိယ ပြည်​ထဲ​ရေး ဝန်​ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်​ပြန်​ချက်​ကို ​အောက်​မှာ ဖတ်​ကြည့်​ရန်​ ဖြစ်​ပါတယ်​။ – ]
Posted On: 05 NOV 2019 10:18AM by PIB Delhi
Unfortunately, one of the Indian national died in custody of Arakan Army due to heart attack. According to information available, he wasachronic diabetes patient. The released Indian nationals, along with the dead body of the deceased, have reached Sittwe and will be leaving for Yangon today for onward journey to India.
ပွီးသညျ့​ နိုဝငျ​ဘာလ (၅) ရကျ​​နကေ့ အိန်ဒိယ ပွညျ​ထဲ​ရေး ဝနျ​ကွီးဌာန ဝကျ​ဆိုကျ​မှာ တငျ​ထားတဲ့ ထုတျ​ပွနျ​ခကျြ​ကျို ဖတျ​ကွညျ့​ပွီး စဉျးစားစရာ အခကျြ​အနညျးငယျ​ ​ခေါငျးထဲကို​ရောကျ​လာတာ ရှိတယျ​။
တဈ​။ ထုတျ​ပွနျ​ခကျြ​မှာ အိန်ဒိယနိုငျ​ငံသားတဈ​ဦး ​သဆေုံးသှားရတဲ့အတှကျ​ ​ဒေါသ သို့မဟုတျ​ အလိုမကခြွငျး အရိပျ​အ​ရောငျ​ လုံးဝမပါဘူး။
နှဈ​။ အိန်ဒိယအစိုးရက “Timely intervention လုပျ​မှု​ကွောငျ့​” “အခြိနျ​နဲ့တ​ပွေးညီ ဝငျ​​ရောကျ​စှကျ​ဖကျ​လုပျ​ကိုငျ​မှု​ကွောငျ့​” လို့ ဆိုထားတယျ​။ ဒီစာသားရဲ့ ​နောကျ​ကှယျ​က မ​ဖျော​ပွတဲ့ အဓိပ်ပါယျ​​တှေ ဖွဈ​စဉျ​​တှကေို​တှေး​တော စဉျးစားမိတယျ​။ သံတမနျ​ဆနျ​ဆနျ​ စကားလုံး​ရှေးခယျြ​ သုံးစှဲထား​ကွောငျး သတိထားမိတယျ​။
သုံး။ ဖွဈ​စဉျ​​တှေ၊ ထုတျ​ပွနျ​ခကျြ​​တှကေို ကွညျ့​လို့ သ​ဘော​ပေါကျ​သ​လောကျ​ဆိုရငျ​ – အိန်ဒိယ ဟာ ​အေ​အကေို တရုတျ​တပညျ့​လို့ သ​ဘောထားတယျ​ ဆိုတာထကျ​ အဆငျ့​အတနျး ပိုလှနျ​ရရှိထားတယျ​။ ကွိုကျ​သညျ​ဖွဈ​​စေ မကွိုကျ​သညျ​ ဖွဈ​​စေ ဆကျ​ဆံရမယျ့​ non-State actor နိုငျ​ငံ​တျော​(အစိုးရ)မဟုတျ​​သော အငျ​အားစု အဖွဈ​ သ​ဘောထားပုံရတယျ​။
​လေး။ ရနျ​ကုနျ​ အိန်ဒိယသံရုံးရပျ​ကှကျ​ရဲ့ အမညျ​မ​ဖျော​လိုတဲ့ ရငျးမွဈ​ဆီက သိရသ​လောကျ​ ကုလားတနျ​စီမံကိနျးမှာပါဝငျ​​ဆောငျ​ရှကျ​​နတေဲ့ အိန်ဒိယနိုငျ​ငံသား​တှကေို ပလကျ​ဝ အစရှိတဲ့ စီမံကိနျးနယျ​​မွေ​တှကေို သှားခှငျ့​မပွုဆိုပွီး​တော့ ပွီးခဲ့တဲ့ မတျ​လ (၁၂) ရကျ​​နကေ့တညျးက (ရခိုငျ​ လုံ/နယျ​ဝနျ​ကွီးအဖွဈ​ ဗိုလျ​မှူးကွီးဖုနျးတငျ့​ တာဝနျ​ယူထားစဉျ​ကတညျးက) တားမွဈ​ထားတာဖွဈ​တယျ​ လို့ ဆိုတယျ​။
ငါး။ ဒီလိုတားမွဈ​ထားတဲ့​နောကျ​ပိုငျးမှာလညျးပဲ အိန်ဒိယနိုငျ​ငံသား​တှဟော ပလကျ​ဝဘကျ​ကို လ​ပေါငျးမြားစှာ အ​ခေါကျ​​ပေါငျးမြားစှာ သှားခဲ့ကွတယျ​ လို့ သိရတယျ​။
​ခွောကျ​။ ဒီကွားထဲမှာ ကုလားတနျ​စီမံကိနျးကို ​အေ​အေ က တားမွဈ​ကနျ့​ကှကျ​တယျ​ လို့​တော့ မကွားမိ​သေးဘူး။ နိုငျ​ငံခွားသား ခရီးသှားလာခှငျ့​တားမွဈ​ထားတာက​တော့ ရခိုငျ​ပွညျ​နယျ​ အစိုးရဖွဈ​တယျ​။
၂၀၁၉ နိုဝငျ​ဘာလ (၆) ရကျ​
[ – အိန်ဒိယ ပွညျ​ထဲ​ရေး ဝနျ​ကွီးဌာနရဲ့ ထုတျ​ပွနျ​ခကျြ​ကို ​အောကျ​မှာ ဖတျ​ကွညျ့​ရနျ​ ဖွဈ​ပါတယျ​။ – ]
Previous လူမြိုးကွီးဝါဒီ​တှေ သတျ​​သခြေိနျ​မှာ ဇိုမီးယနျး​တှေ ညီညှတျ​ကွ
Next ​ပလကျ​ဝ NLD အမတျ​ နှငျ့ ​အေ​အေ အကွား ဇာတျ​လမျး